Marka aad isticmaalaysid qalabka Apple ah, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay qaar ka mid ah plugins aad muhiim u ah oo lagama maarmaanka u ah iPhoto. Halkan waxaa ku qoran 10 plugins iPhoto in faahfaahinta ay muhiim tahay in aad waayo-aragnimada iPhoto fudud, ammaan iyo raaxo leh.
Plugin 1: ISKU MIDKA AH Annihilator
Nuqul Annihilator waa plugin ugu fiican ee iPhoto in la baabi'iyo yaac iyo sawiro aad maktabadda iPhoto. Marka aad ka heshay culayska ka mid ah sawirrada ilo kala duwan si aad albums iPhoto, waxaad la kulmi kartaa sawiro muunad kuwa nuqulo tiro badan oo ay si fudud u baabi'inta. Waxaa is barbardhigi kartaa sawiro in farsamooyin kala duwan oo ay magaca file, size, taariikhda abuurka image, xallinta tiirarkii soocaa. Qalabkani waxa uu weyn waxaad heli kartaa in ka badan lacag la'aan ah albums iPhoto kaydinta in dadaal gaaban iyo aad u bixiyaan gargaar weyn ka daba yaac iyo sawir aad gaari ku adag / kaydinta. Waxaad heli kartaa tan plugin laga cabsado soo bixi xidhiidhka ka bixiyo $7.95.
Baro wax badan oo ku saabsan nuqul Annihilator >>
iPhoto Buddy waa plugin ammaan ah iPhoto bixiya interface fudud oo dhiirigalin u iPhoto. Waa saaxiib kan qumman iyo kan dhabta ah ee aad iPhoto si ay u maareeyaan maktabadaha iPhoto, beddelaan maktabado badan oo bixiya waxaad ka raadsan kartaa iyada oo magacyada tag, xilsaarayo thumbnails iyo ilaalinta gaarka ah ee maktabadaha ah. Waa content oo lacag la'aan ah si ay u soo bixi.
Baro wax badan oo ku saabsan iPhoto Buddy >>
Plugin 3: Aragtida
Aragtida kuu ogolaanayaa inaad ilaalinta sawirrada u isticmaalaya dadka kale iyo helo watermark on sawirkaaga in ilaaliyaa aad copyright. Waxaa muhiim ah iyo mid ka mid ah plugin ugu fiican ee iPhoto in qalabka tufaax aad. Marka sawir waa ganacsigaaga, waxaad u baahan tahay waxaa ka mid ah deg-deg ah. Aragtida waa la heli karaa si ay u soo bixi xiriirka hoose, iyo waxa aad ku kici doona $ 9.99.
Baro wax badan oo ku saabsan Aragtida >>
GrowlPhoto waa plugin weyn in si weyn loo isticmaalo iPhoto in qalabka qalabka / tufaax Mac. Waxaa aad u saamaxaaya in ay bixiyaan farriimaha marka aad soo degida ka qalabka camera inuu kusoo dhamaan doono. Waa plugin aad u xiiso iyo qabsado oo ka dhigi kartaa in aad isku halayn karo waxa on. Waa lacag la'aan ah si ay u soo bixi ka eeg xiriirka hoose.
Baro wax badan oo ku saabsan GrowlPhoto >>
PictureSync waa plugin koombiyuutarka Dufcaddii loo isticmaalo iPhoto kuu ogolaanaya inaad si hagaagsan photos in aad xisaabta Zooomr, Flickr ama Facebook. Waxaad jiidi karaan jeedi sawir files meel kasta si ay koombiyuutarka sawir online kale amnigeeda by this plugin PictureSync ugu lagama maarmaan u ah iPhoto.
Baro wax badan oo ku saabsan PictureSync >>
Ma waxaad is walwalsan tahay inay u dhoofiyaan photos in aad xisaabta Flickr ka qalabka tufaax ah? FFXporter soo baxay ayaa kaa caawin doona in ay u geliyaan sawiro aad ka iPhoto faahfaahinta iyo sidoo kale GPS tags u ogolaanaya isagoo. FFXporter waa mid ka mid ah plugin caanka iPhoto si ay u qabtaan shaqo this si guul ah in lagala soo bixi karaa lacag la'aan ah ka eeg xiriirka hoose.
Baro wax badan oo ku saabsan FFXporter >>
Plugin 7: iPhoto Cuntada
iPhoto Cuntada waa plugin ah codsiga iPhoto in qalabka Apple. Waxaa aad u saamaxaaya in ay wax ka beddelid ama hayaan aan loo baahnayn, waayo, sawiro iyo astaamo thumbnail saarto, la baabi'iyo daba yaac, la ogaado oo u tirtiri soo baxay files iyo fayl ku jira oo aan loo baahnayn. iPhoto Cuntada lagala soo bixi karaa hoos ku link lacag la'aan ah.
Baro wax badan oo ku saabsan iPhoto Cuntada >>
Plugin 8: Maareeyaha iPhoto Library
Tababare iPhoto Library Waa mid ka mid ah plugin ugu caansan iPhoto kuu ogolaanaya inaad si ay u sameeyaan iyo xakameeyo maktabado badan ku iPhoto. Album Tani lagu kaydin karaa gal la wadaago, kaydinta dibadda ama disk adag gudaha si aad Mac. Waxa kale oo ay taageertaa aad dib u dhiska albums kharribeen iPhoto iyo in ay qaataan sanamyada gudaha ka dhaawacan album / maktabadda. Tababare iPhoto Library siiyaan inaad hesho nuqul, midowdo ama u hagaagsan ka mid ah maktabadaha in qalab tufaax ah. Waa bilaash on tijaabo ah, laakiin kharash $29.95 in lagu iibsado.
Baro wax badan oo ku saabsan Manager iPhoto Library >>
Plugin 9: FlickrExport u iPhoto
Price: liisanka Single: $20.99, Hagaaji ka v3: $10.95
Flickr helay hab sahlan oo awood leh si aad u maamusho photos uploaded ka iPhoto. Waxay ku siin doonaa mudnaanta in ay geliyaan videos in xisaab badan Flickr. Waxay kuu ogolaaneysaa in aad xaalkaa, gacanta ku gaarka ah, tag, ku dar photos in Flickr Group Pool iyo sawir resize halka koombiyuutarka. Waxaa kici doona in aad isticmaasho, oo ka link isha aad kala soo bixi kartaa.
Baro wax badan oo ku saabsan FlickrExport u iPhoto >>
Plugin 10: Shutterfly dhoofinta xigeenka iPhoto
Shutterfly dhoofinta xigeenka iPhoto waa plugin ah Shutterfly in aynu aad geliyaan sanamyadiinna dhex iPhoto in account Shutterfly ah. Waad la kulmi kartaa in la sameeyo album cusub oo si toos ah u geliyaan sawiro ama mid jira aad hore u abuuray in. Shutterfly waxaa loo yaqaanay qaybsiga sawir iyo mashruuca sawir abuuro website. Waxaad heli kartaa plugin Shutterfly iPhoto ka soo bixi lacag la'aan ah ka link siiyey.
Baro wax badan oo ku saabsan Shutterfly dhoofinta xigeenka iPhoto >>
> Resource > Mac > Top 10 faa'iido leh iPhoto plugins